नेपाल आज | नेप्से २० अङ्कले बढ्यो
नेप्से २० अङ्कले बढ्यो
बुधबार, ०१ माघ २०७६ गते प्रकाशित - नेपाल आज
काठमाडाैँ – पुस मसान्तमा घटेको सेयर कारोबारमापक नेप्से परिसूचक माघको पहिलो दिन २० अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज नेप्से परिसूचक २०.८५ अंकले बढेर १२८४.२३ मा पुगेको छ ।
यस्तै, सेन्सेटिभ परिसूचक ४.६८ अंकले बढेर २७८.९७ मा पुगेको छ । परिसूचक २० अंकले बढ्दा कारोबार रकम भने ९० करोडमा समेटिएको छ ।स्टकका अनुसार आज कुल १ सय ७७ कम्पनीका ३० लाख ५५ हजार २ सय ३३ कित्ता सेयर ९० करोड ४८ लाख १३ हजार ९ सय ३२ रुपैयाँमा खरिदबिक्री भयो ।
कारोबार भएका कुल १२ मध्ये तीन उपसमूहको सेयर ओरालो लागेको छ । होटल ३.५४ अंकले घट्दा उत्पादन १६.०६ र अन्य उपसमूहको सेयर ०.८४ अंकले गिरावट भएको छ । बैंकिङ २७.१६, व्यापार ६३.४७, विकास बैंक ३५.४२, जलविद्युत् ४.२९, फाइनान्स २०.१२, निर्जीवन जीवन बीमा २३.६३, माइक्रोफाइनान्स २७.२, जीवन बीमा ८१.०७ र सामूहिक लगानी कोष ०.०६ अंकले बढेका छन् ।
आज सबैभन्दा बढी एनआईसी एसिया बैंकको सेयर कारोबार भयो । सो बैंकको सेयर ७ करोड ४० लाख ७४ हजार ७ सय ७० रुपैयाम खरिदबिक्री भयो ।
यस्तै, एनएमबी बैंकको ३ करोड १८ लाख ८२ हजार ८ सय २० रुपैयाँ, नेपाल बैंक लिमिटेडको २ करोड ९० लाख ७१ हजार ९ सय ५३ रुपैयाँ, नागरिक लगानी कोषको २ करोड ८६ लाख ३१ हजार ६ सय ९६ रुपैयाँ, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको २ करोड ५८ लाख ६६ हजार ४ सय ३८ रुपैयाँ, डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाको २ करोड २८ लाख ९१ हजार ४ सय १८ रुपैयाँ र एभरेष्ट बैंक लिमिटेडको सेयर २ करोड १७ लाख ७४ हजार १ सय ५७ रुपैयाँमा खरिदबिक्री भयो ।
आज सबैभन्दा बढी विशाल बजार कम्पनीका सेयरधनीले ९.९८ प्रतिशतले कमाए । यस्तै, रिलायन्स फाइनान्स ९.९२, इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था ९.८८, महिला सहयात्रा माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था ९.८५, पाँचथर पावर कम्पान्ट लिमिटेड ९.७६ तथा पञ्चकन्या माइ हाइड्रोपावर र मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेडको लगानीकर्ताले सामान ९.४७ प्रतिशतले कमाए ।
स्टकका अनुसार आज रैराङ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्टको लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी ७.२७ प्रतिशतले गुमाए । यस्तै, सेन्ट्रल फाइनान्स कम्पनी २.७५, शिवम् सिमेन्टस् लिमिटेड २.६५, सानिमा बैंक ऋणपत्र २, दिव्यश्वरी हाइड्रोपावर १.८८ र कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडका सेयरधनीले १.७८ प्रतिशतले गुमाए ।
चिनियाँ रक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीको भेटमा के भयो कुराकानी ?
नेकपाको विवादले जसपामा खैलावैला, फुट्ला त पार्टी ?
अफगानिस्तानमा आत्मघाती आक्रमणमा परी २६ सुरक्षाकर्मीको मृत्यु